လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း၂၀၀၀ ကျော်တွင် ယနေ့ခေတ်သုံးနေသော စမတ်ဖုန်းတွေ သုံးခဲ့သလား..? - Cele Platform
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း၂၀၀၀ ကျော်တွင် ယနေ့ခေတ်သုံးနေသော စမတ်ဖုန်းတွေ သုံးခဲ့သလား..?
ရုရှနိုင်ငံ Tuvaဒေသ မြစ်အတွင်းက သဲသောင်ပြင်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၁၀၀ခုနှစ်က မြုပ်နှံထားတဲ့ လူအရိုးစု သင်းချိုင်း ရုပ်ကြွင်း တွေကို ရှာဖွေတွေ့ ရှိခဲ့ရာမှာ ယခုခေတ်ပေါ်နေတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေပုံစံ လေးထောင့် အပြား( ခါးပတ်ထိပ်ခေါင်းပိုင်း) တခုကို အရိုးစုကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့ ရှိခဲ့ကြောင်း ဆိုက်ဘေးရီးယား siberiantimes.comသတင်းမှာဖေါ်ပြားပါတယ်။
ဒါ့အပြင်တရုတ်ရှေးဟောင်း Wuzhu မင်းဆက် ခေတ်သုံးငွေကြေးဒင်္ဂါးပြားကိုပါတွေ့ ရပါတယ်။
ရှေးအကျဆုံး အရိုးစု ရုပ်ကြွင်းတွေဟာ တချိန်က အဆိုပါ ဒေသတွင်း မှာ ရွေ့ ပြောင်းနေထိုင်နေကြတဲ့ သီချင်းသည်တွေလို့ လည်း သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ်။
ဂေါတမ ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မှုတဲ့ အချိန်ကာလကက ယာဉ်ပျံတွေ ပေါ်ပေါက်နေပြီဆိုတာ အန္ဒိယ ရှေးဟောင်းကျောက်စာ တွေမှာဖေါ်ပြားတာ တွေ့ ရပါတယ်။
စင်္ကြာဝဠာမှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ ဗြမ္မာ လူမျိုးတွေဟာ ဂေါတမဘုရားရှင်ကို ယာဉ်ပျံတွေနဲ့လာခေါ်သွားပြီး တရားနာခဲ့ကြတယ်။ လူ့ ပြည့်ခရီးကို ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ၀ါတွင်းသုံးလပါတ်လုံးကြာခဲ့ပြီး သေနသနဂြိုလ်ပြည်စေတ၀န်ကျောင်းတော်ကို ပြန်ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဆေးရေးပန်ချီတွေဟာ တချိန်က နည်းပညာ ထွန်းကားခဲ့တဲ့ ခေတ်တခုကို ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သက်သေတစ်ခုပါ။SAW
ရုရှနိုငျငံ Tuvaဒသေ မွဈအတှငျးက သဲသောငျပွငျမှာ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၁၀၀ခုနှဈက မွုပျနှံထားတဲ့ လူအရိုးစု သငျးခြိုငျး ရုပျကွှငျး တှကေို ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့ရာမှာ ယခုခတျေပျေါနတေဲ့ စမတျဖုနျးတှပေုံစံ လေးထောငျ့ အပွား( ခါးပတျထိပျခေါငျးပိုငျး) တခုကို အရိုးစုကိုယျပျေါမှာတှရှေိ့ခဲ့ကွောငျး ဆိုကျဘေးရီးယား siberiantimes.comသတငျးမှာဖျေါပွားပါတယျ။
ဒါ့အပွငျတရုတျရှေးဟောငျး Wuzhu မငျးဆကျ ခတျေသုံးငှကွေေးဒင်ျဂါးပွားကိုပါတှရေ့ပါတယျ။
ရှေးအကဆြုံး အရိုးစု ရုပျကွှငျးတှဟော တခြိနျက အဆိုပါ ဒသေတှငျး မှာ ရှပွေ့ောငျးနထေိုငျနကွေတဲ့ သီခငျြးသညျတှလေို့လညျး သုတသေီတှကေ ဆိုပါတယျ။
ဂေါတမ ဘုရားရှငျပှငျ့တျောမှုတဲ့ အခြိနျကာလကက ယာဉျပြံတှေ ပျေါပေါကျနပွေီဆိုတာ အန်ဒိယ ရှေးဟောငျးကြောကျစာ တှမှောဖျေါပွားတာ တှရေ့ပါတယျ။
စွင်ျကာဝဠာမှာ နထေိုငျနကွေတဲ့ ဗွမ်မာ လူမြိုးတှဟော ဂေါတမဘုရားရှငျကို ယာဉျပြံတှနေဲ့ လာချေါသှားပွီး တရားနာခဲ့ကွတယျ။ လူ့ပွညျ့ခရီးကို ပွနျရောကျတဲ့အခြိနျမှာ ဝါတှငျးသုံးလပါတျလုံးကွာခဲ့ပွီး သနေသနဂွိုလျပွညျစတေဝနျကြောငျးတျောကို ပွနျပို့ဆောငျခဲ့တဲ့ ဆေးရေးပနျခြီတှဟော တခြိနျက နညျးပညာ ထှနျးကားခဲ့တဲ့ ခတျေတခုကို ဖွတျသနျးခဲ့တယျဆိုတဲ့ သကျသတေဈခုပါ။SAW
အကယ်ဒမီ ကိုနေတိုးရဲ့ အသက် (၃၈) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အလှူ
မိတ္ထီလာ၌မြန်မာ့ရိုးရာ လောင်းလှေပြိုင်ပွဲ စတင်ကျင်းပ